Isiseko soVeliso esiBukrelekrele saseQingshan Lake-Holley Technology Ltd.
I-Hangzhou Qingshan Lake Intelligent Manufacturing Base
I-Hangzhou Qingshan Lake Intelligent Manufacturing Base ithatha indawo ye-96,000 yeemitha zesikwere.Isigaba sokuqala sotyalo-mali yi-72.5 yezigidi ze-USD, umthamo owenziweyo wonyaka wemveliso yi-50 yezigidi zeeseti zeemitha, kwaye ixabiso lemveliso yi-725 yezigidi ze-USD.
I-Smart Factory yenye yeebhetshi zokuqala zoshishino 4.0 zokuvelisa iiprojekthi ezikhethekileyo zeSebe loShishino kunye neTekhnoloji yoLwazi.Ezona mpawu ziphambili zezi: inkqubo yolungiselelo oluzenzekelayo ngokupheleleyo, inkqubo yokuzenzela inkqubo ephakathi kunye nenkqubo yolwazi edityanisiweyo kakhulu.
INqanaba lokuKhula lokuKhula kweNqanaba lesi-3 lokuVeliswa koMveliso
Ukulungiselela Phambi Kwemveliso
Gqiba kwaye Ugcine
● Yamkelwe ngenkqubo yokuodola/yokufumana ngokuzenzekelayo, zonke izixhobo zinokulandelelwa;
● Zonke izinto zokuhlola kunye nemigangatho zikhutshwa yinkqubo kwisixhobo, zonke izicwangciso zinokulandelwa.
● Yonke inkqubo yimveliso ezenzekelayo, ukuhlolwa kwe-100% kuyenziwa, iimveliso ezineziphene zihlelwa ngokuzenzekelayo, umgangatho weenkqubo zangaphambili nangemuva zidibeneyo, kwaye idatha yokuvelisa iyabonakala kwaye iyalandeleka;
● Iinkqubo ezine ezinkulu (i-PLM, i-MES, i-WMS, i-ERP) kuyo yonke inkqubo ukusuka ekwamkelweni komyalelo ukuya ekuhanjisweni kuhlanganiswe kakhulu, kwaye umjikelezo wemveliso ufinyeziwe nge-30%.
8 imigca yemveliso ye-SMT ezenzekelayo ngokupheleleyo
8 imigca yemveliso ye-DIP
14 imigca yoqinisekiso oluzenzekelayo ngokupheleleyo